Waxbarashada dalka iyo waajibka dowladda iyo shacabka - Halbeeg News
Waxbarashada dalka iyo waajibka dowladda iyo shacabka
Sanadahan dambe waxaa soo kordhayay hadal haynta waxbarashada Soomaaliya, tayada waxbarashada ay bixiyaan hay’adaha waxbarashada ee dalka, tirada jaamacadaha cusb ee maalin walba laga furayo Muqdisho. Hadalkii dhawaan kasoo yeeray wasiirkii hore ee waxbarashada ee la sheegay inuu xilkiisii ku waayay uguma horreynin hadal haynta waxbarshada ugumana dambeyn doono ee way jiri doontaa dooddan, sababtoo ah waxbarashada hoose iyo midda saraba waa arrin taabanaysa mustaqbalkii dalkeenna, shacabka Soomaaliyeedna ku bixiyay dadaal iyo kharash badan, waxayna mudan tahay dood ka wayn dhacdo waqtiyeysan oo maalmo la hadal hayo, kadibna la iska ilaawo.
Hadaba, anigoo kamid ahaa macalimiintii ka soo shaqeysay waxbarashada laga soo bilaabo sanadkii 1992, waxaan qormadan uga qeyb qaadanayaan doodda waxbarashada, waxaana uga hadli doonaa qodobadan soo socda: heerarka ay soo martay tacliinta Soomaaliya gaar ahaan Koonfurta, halka ay marayso maanta tacliinta, turraanturrooyinka ay ka soo gudubtay waxbarashada, halka ay beeshay waxbarashada dalka, mas’uuliyadda shacabka iyo dowladda ka saaran waxbarashada.
Heerarka ay soo martay waxbarashada burburkii ka dib
In la fahmo halganka uu u soo galay shacabka Soomaaliyeed iyo waxgaradkii ku haray gudaha dalka si loo dhiso hanaan waxbarsho oo lagu badbaadiyo ubadka Soomaaliyeed, iyo halka ay maanta soo gadhay waxbarshada oo ah meel aad u sarreyso, waxa ay fura u tahay maanta dadaal kasto oo la doonayo in lagu hagaajiyo waxbarashada, cid kasta oo doonaysa inay wax ka qabato dhibka haysta waxbarashadana waan inay la socotaa halgankaas. Sidaa draadeed geedi socodka waxbarshada dalka, gaar ahaan Koonfurta, waxa uu soo maray dhowr marxaladood, waxaana ku soo uruurinayaa Shan heer.
Marxaladii ugu horreysay waxa ay aheyd billowgii sagaashanaadkii (1991-1995), waxbarasha waxa ay aheyd mid kooban, oo ah badankeed deeq ay bixinayeen hay’adaha islaamiga, qeybna ka ah gargaarkii loo fidiyay shacabka. dugsiyadu waxay ay ahaayeen hoose/dhexe, mana jirin dugsiyo sare. Tiro yar ayaa waxbaraneysay, ujeedada waalidiinta waxay aheyd inay ku sugaan waxbarasho dowladeed oo rasmi ah sidii ay yaqaaneen. Waxaa garab socday Iskuulada caruurta yaryar dhiganayeen kuwa loo yaqaanay privet-ka ee luqadda Ingiriirska, ee dadka waaweyn wax ku baran jireen
Marka laga soo tago tirada caruurta heli karta waxbarasho oo aad u yareyd, hadana waxaa jiray caqabado dhowr ah oo waalidiinta qaar ka hortaaagnaa inay ka fikiraan waxbarashada ubadkooda, oo ay kamid aheyd: gaajada haysatay qoysas badan oo xilligaas ka fikirayay kaliya sidii ay wax ay cunaan ugu heli lahaayeen caruurtooda, in badan oo kamid ah dadkii reer magaalka ahaa oo u qaxay dibadda, badalkoodina ay magaalooyinkii yimaadeen dadkii miyiga oo aysan qorshaha ugu jirin waxbarshada iskuulka, iyo sidoo kale dadka oo yaqaanay in waxbarashadu tahay adeeg lagu bartay in ay bixiso kaliya dowladda, iyo arrimo la mid ah.
Marxaladda labaad ( 1995- 2001) waxaa soo baxday in deeqdii hay’adaha carabta ay siinayeen iskuuladda sii socon doonin waqti dheer, loona bahanyahay in shacabka Soomaaliyeed ka qeyb qaato miisaaniyadda waxbarashada, sidaa daraadeed lacag yar ayaa la saaray waalidiinta, waxaa bilowday in la furo dugsiyo sare, waxaa kordhay ardayda waxbarashada u aadaysa wadamada carabta iyo kuwa soo dhamaystay ee dib ugu soo noqonayo dalka, macalinimada waxa ay noqotay shaqada ugu badan ee loo dareero, waxaa bilowday in la furo dugsiyo gaar loo leeyahay oo lacag lagu dhigto. Maadaama ay soo baxeen arday ka qalinjabisay dugsiyadii sare, isla markaana dhamaantood wada heli Karin deeq waxbarsho dibadeed waxaa soo ifbaxay fikirka ah in la aas’aaso jaamacado iyo machadyo sare (jaamacadda Muqdisho 1997, machadkii Simad 1998). sidoo kale waxaa soo ifbaxay baahida loo qabo in la abuuro dallado waxbarasho si loo mideeyo waxbarshada ( FPENS 1999).
Marxaladda sedexaad (2001-2006): marxaladan waxa ay ku soo beegantay soo dhisiddii xukuumaddii C/qaasim iyo rajadii wayneyd ee gashay shacabka Soomaaliyeed in la helo dowlad iyo nabad, inkastoo dhanka kale ku soo beegantay dagaalkii maraykanka ee la magic baxay “argagixiso la dirir” . Waxbarashu waxa ay noqotay xilligaasi mid is bixin karta, waxaa soo bilowday ardayda kasoo qalinjabisay jaamacadaha dalka sida Muqdisho iyo machadkii Simad, sidoo kale waxaa kordhay ardaydii jaamacadaha wadamada carabta ka soo baxay oo ka shaqo bilaabay jaamacadaha, dugsiyada, shirkadaha, isbitaalada iyo dhamaan hay’adaha adeegga iyo ganacsiga. waxaa bilowday in jaamacado shisheeye laamo looga furo gudaha dalka, Qeyb wayen Maalgashigii iyo gnacsigii waxa uu aaday waxbarashada gaar ahaan dugsiyada.
Marxaladda afraad (2007-2011): marxaladan waa xilligii dagaalada iyo barakaca ay ku jireen shacabka ku nool Koonfurta Soomaaliya, wax horumar ah oo la taaban karana ma sameynin waxbarashada, laakiin waxa ay iskulada , hay’adaahaa waxbarashaada iyo jaamacadahaba ku dadaaleen inay jiraan oo ay la falgalaan xaaladdii dagaal ee lagu jiray, hay’adahaa waxbarashada waxa ay u raaceen shacabka goobaha uu u qaxay , dadweynaha Soomaaliyeed ee ku noolaa muqdisho iyo Koonfurta waxa ay muujiyeen dadaal xoog leh inay ubadkooda wax baraan xaalad kasta oo la soo gudboonaataba.
Marxaldii shanaad ( 2011 illaa hadda) marxaladan wax ay caan ku tahay Bulaalkii Jaamacadaha, halka 2006 dii waddo walbo uu ku yaalay iskuul ama machad, 2012 ka wixii ka dambeeyay guri walba waxa lagu dhajiyay boor jaamacadeed. Arintani waxa keenay dhowr sababood oo isbiirsaday oo ay kamid yihiin: tirada ardayda farada badan ee kasoo baxaysa dugsiyada sare oo ay u arkeen dadkii lahaa iskuulada inay tahay fursad ganacsi , kuna fikireen si aysan u dhaafin inay u sameystaan jaamacado, waalidiinta Soomaaliyeed oo ku qancay inay waxbarashada jaamacaadeed tahay furaha shaqada iyo nolasha.
Waxaa saaciday arintaas saldhigashada dowladda federaalka iyo in shahaadada jaamacadeed tahay shardiga qabashada jagooyinka iyo shaqooyinka dowladda, waxayna arrintaasi xoogaysatay markii dowladdii Xasan Sheekh hirgalisay heerarka loo kala sameeyay shaqaalaha dowladda, iyadoo mushaarka qofka sita shahaadada jaamacadda laga dhigay $ 700, arrintaasoo keentay in xitaa dadkii waaweynaa ee shaqaynayay ee ay dhaaftay fursaddii waxbarasho ay dib u looxjiitaan jaamacadda. Sidaa daraadeed waxaa aad u kordhay maalgashiga waxbarashada, qayb badan oo kamid ah ganacsatadiina waxa ay raasamaalkoodii usoo wareejiyeen ka ganacsiga adeegga waxbarasho.
Turraanturrooyinka ay waxbarashadu ka soo gudubtay
Waxbarashada waxa ay ka soo gudubtay turraanturrooyin adag, waxayna kasoo talaabsatay boholo waaweyn, dhisidda iskuuladii iyo jaamacadahii ugu horreeyay waxa laga soo maray boob iyo bililiqo, baad la siiyay mooryaantii iyo madaxdii jabhadaha, dil loo geystay ardayda iyo maamulka. Ardaydii ugu horreysay ee wax la baro waxaa in badan oo kamid ah lagu keenay baryo inay dhigtaan waxbarasho bilaash ah oo samafal ah, iskuulada qaarkood iyo jaamacadaha hadda jira waxa la biliqaysatay dhowr mar, kadib ayaana dib loo dhisay mar kale. Ardayda waxa ay wax ku barteen jawi dagaal oo ay dhexmarayeen marka ay u socdaan iskuulka iyo jaamacadda furumo dagaal, waxaa naftoodii ku waayay halgankaas arday iyo macalimiin badan.
Guulaha ay gaartay waxbarashada
Shacabka Soomaaliyeed waxa uu gaaray isku-tashi dhanka waxbarashada ah, waxaa guul weyn oo aan la qiyaasi karin ah in tacliintii kasoo bilaabatay heer in lagu baryo waalidiinta inay caruurtooda iskuul bilaash ah keenaan, oo la gaarsiiyo heer inay ku qancaan maanta inay lacag adag ku bixiyo waxbarashada, aaminaan inay tahay mustaqbalka. tacliintu waxa ay gaartay heer in jaamacadaha dalka ay tartan la galaan jaamacadaha Afrika iyo kuwa Carabta, ardayda wax ku baratayna ee master kasoo qaataan jaamacadaha dibadda, kursigana la fariistaan tartanna la galaan, arday wax ku soo baratay wadamada aduunka ee xasilloon.
Xagay Beeshay Waxbarashada
Shaki kuma jiro in shacabka Soomaaliyeed bixiyay dadaal aan caadi aheyn, dushana u ritay mas’uuliyaddii dowladeed ee aheyd in wax la baro jiilalka soo korayo, aqoonyahanadii ku hartay gudaha ee u hogaamisay dadka dhanka tacliintana ammaan iyo duco ayay mudanyihiin, laakiin taasi macnaheedu ma aha in ay tacliintii fiyowdahay . Su’aashu waxa weeye xagay ka buktaa tacliintu?
Tacliintu waxa ay bukootay markuu soo galay nin ganacsade ah oo ka fog bahda waxbarashada, oo aan laheyn damiir, oo arkay in suuqa waxbarashada uga faa’iido badan yahay ganacsigiisii burka iyo bariiska, ujeedadiisuna tahay faa’iido oo kaliya, ka dibna intuu xero ootay ka bilaabay caruudrta qaraabadiisa iyo tolkiisa ah, ulana dhaqmay caruurta inay yihiin badeeco laga raadinayo macaash, aana garaneynin dhibka uu u gaysanayo mustaqbalka caruurta inta uu la eg yahay. Dhibka ugu wayn ganacsadahan waxa uu ku hayaa bahda waxbarashaada intooda hagaagsan, ganacsadahan bixinayo adeegga waxbarasho ee dilaya maskaxda iyo dhaqanka caruurta waxa uu lamid yahay ganacsadaha keenayo dawada iyo raashinka dhacay ee dilayo caafimaadka dadka.
Inta laga helayo dowlad gudan karta waajibkeedii ahaa inay bixiso adeeg waxbarasho, ilaalisana tayada adeegga waxbarasho ee ay bixinayaa hay’adaha gaarka loo leeyahay, waxaa saaran shacabka Soomaaliyeed waajib inuu isaga is ilaaliyo, sare u qaado wacyiga uu ku kala sooci karo adeegga waxbarashada tayada leh, shacabka Soomaaliyeed ha ka digtoonaado in lagu siro tolnimo, sida qof walbo uusan diyaar ugu aheyn inuu dawo dhacday u siiyo caruurtiisa isagoo ku qaraabo kiilayo nin tolkiis ah, si lamid ah waa inuusan u aqbalin inuu jaamacad tayo xun qaraabo kiilnimo u geyo caruurtiisa , uguna ciyaarin mustaqbalkooda.
Shacabka Soomaaliyeed wuu soo dadaalay, canaanna kuma laha inuu dusha u ritay culayska wabarashada caruurta Soomaaliyeed , qarashna ku bixiyo siduu wax u bari lahaa ubadkiisa, ee cidda kaalinteedii gabtay, mas’uuliyadeediina dayacday waa dowladda oo illaa iyo hadda aan bixinin adeeggii waxbarasho ee xaqa loogu lahaa, aan la imaanin sharci nidaamiya waxbarashada, lagu kormeeero iskuulada iyo jaamacadaha gaarka loo leeyahay. dambiga waxaa leh dowladda oo iyadu siisa warqadda aqoonsiga jaamacad walba oo la furayo lacagna ka qaadata, dhibka haysto waxbarashada waa xubnaha baarlmaanka oo tolnimo u difaaca hay’ad walba oo samaysa fal sharci darro ah, oo ay kamid yihiin kuwa waxbarashada, marka la damco in tallaabo laga qaado.
Gabagabadii, waxaa la hubaa in cid aan laheyn qiyam (values) ama risaalo ka baxsan faa’iido in la helo, aysan bixin Karin adeeg waxbarasho, laguna aamini Karin inay dhisaan maskaxda iyo dareenka ubadkeenna. Waxaa imaan doonto maalin qof walba oo shacanbka ka iibiyay waxbarasho liidata lala xisaabtamo, inta aan la gaarin dad kale waxa la xisaabtami doono ardaydiisii oo ku lacnadi doonta khiyaanada uu u geystay, mustaqbalkii uu ka lumiyay iyo kharashkii uu ka qaatay intaba, taariikhdana markaas ka gali doonaan baal madow, xisaabtii ilaahayna usii dheertahay intaas. halka taas badalkeeda inta waxbarashada dhabta ah bixiso ee kasoo baxday ma’uuliyadda saarana ay mudan doonaan ammaan iyo duco, taariikhdana ka gali doonaan baal dahab ah, abaal-marintii Ilaahayna usii dheer tahay.
Dr. Momamed Ibrahim Abdi (M. Deeq)-Bare ka tirsan Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed iyo Jaamacadda Muqdisho
Muwaadin Soomaaliyeed oo loo magacaabay xilka la taliyaha xoghayaha IGAD
Nairobi: Booliska oo hawlgal ka wada xarunta Darul Shifa